कोरोना सन्त्रासका कारण मानसिक समस्या - नेपालबहस
कोरोना सन्त्रासका कारण मानसिक समस्या
| १७:३१:२४ मा प्रकाशित
२८ असोज , बागलुङ । कोभिड–१९ को प्रकोपपछि मानिसमा मानसिक समस्या बढेको छ । दैनिकी खल्बलिनु, रोजगारी÷कमाइ गुम्नु, महामारीको सन्त्रासजस्ता कारणले मानसिक समस्या बढेको हो । धवलागिरि अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. धीरेन्द्र पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ अघि मानसिक समस्या लिएर अस्पताल आउने फाटफुट्ट हुन्थे । अहिले दैनिक ६÷७ जना बिरामी अस्पताल आउँछन् ।
“प्यानिक अट््याक भएर आउने बढी छन, छाती दुख्यो, मलाई हृदयघात भयो की ? भन्दै आउछन”, उनले भने । एक्कासि उत्पन्न हुने अत्यधिक त्रासले ‘प्यानिक अट्याक’ निम्त्याउने गर्छ । तनाव, डर, चिन्ता, एक्लोपना आदि कारणले ‘प्यानिक अट्याक’ हुने डा पौडेलको भनाइ छ ।
दिग्दारीपन, आत्तिने-डराउने ‘एन्जाइटी’लगायतका मनोरोग पनि बढीरहेको उनले बताए । “छ वर्षको बच्चालाई पनि एन्जाइटी भएर म कहाँ लिएर आएका थिए”, डा पौडेलले भने, “नियमित पढाइ रोकिँदा, घरमै बसिरहँदा बालबालिकामा पनि मानसिक समस्या बढिरहेको छ ।” उनले बालबालिकालाई घरमै मायालु वातावरणसहित सिकाइ र सिर्जनशील काममा व्यस्त राख्नुपर्ने बताए।
बागलुङ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामप्रसाद खनालले मानसिक समस्या समाजमा लुकेर बसेको बताए । “अस्पताल आउने झण्डै एक तिहाइमा कुनै न कुनै खाले मानसिक समस्या देखिन्छ”, उनले भने, “कोभिड–१९ पछि यो सङ्ख्या अझ बढ्दो छ, यो अवधिमा आत्महत्याका घटना पनि धेरै भए ।”
नेपाल प्रहरीको आँकडा अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्ममा दुई हजार २१८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जनस्वास्थ्य अधिकृत खनालले सामाजिक, मानसिक र जैविक कारणले मानसिक रोग निम्तने गरेको बताउनुभयो । मानसिक समस्याबाट गुज्रेका मानिसको पहिचान र उपचारका लागि पहुँच तथा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बागलुङ नगरपालिका–३ का अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले कोरोना जाँचका लागि स्वाब दिएपछि नतिजा नआउञ्जेलसम्म पनि मानिस ठूलो पीडा र अत्यासमा बस्नुपरेको अनुभव सुनाए । उनले मानसिक समस्या लुकाउने र स्वीकार्न नसक्ने स्थितिले रोग न्यूनीकरणमा चुनौती थपेको उल्लेख गरे । वडाध्यक्ष बाँस्कोटाले समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुरज गुरौले योग र ध्यानबाट पनि कतिपय मानसिक समस्याबाट मुक्ति मिल्ने बताए । “योग, ध्यानलाई अहिले विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ, यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य चुस्त राख्न सघाउँछ”, उनले भने। डा पौडेलले मानसिक समस्या भएका बिरामीलाई मनोपरामर्श, थेरापी र औषधिबाट उपचार गरिने बताए ।
“शरीररमा रासायनको गडबडीजस्ता जैविक कारणले भएको समस्यामा औषधि नै चलाउनुपर्छ, कतिपय बिरामी मनोपरामर्श, थेरापीबाट पनि ठिक हुन्छन्”, उनले भने । अधिकांश मानसिक रोग छ देखि दुई वर्षसम्म नियमित औषधि खाँदा निको हुन्छन् । गम्भीर मनोविकृतिको अवस्थामा भने लामो समयसम्म औषधि लिनुपर्ने हुन्छ ।
मानसिक समस्याबाट छुटकारा पाउन जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले बाहिर देखिएभन्दा ठूलो जनसङ्ख्यामा मानसिक समस्या रहेको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
“अबदेखि मानसिक स्वास्थ्यलाई वार्षिक योजनामै समेट्छौँ”, उनले भने, “हरेक व्यक्ति शारीरिक मात्र होइन मानसिक रुपमा पनि उत्तिकै स्वस्थ हुनु जरुरी छ ।” यही साता नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवससमेत मनाएको थियो । वर्षेनी अङ्ग्रेजी महिना अक्टुबर १० मा यो दिवस मनाइन्छ ।
किशोरकिशोरीमा बढी मानसिक समस्या १ महिना पहिले
वालिङ नगरपालिकाको ध्यान उत्पादकत्व बढाउनमा केन्द्रित छ : नगर प्रमुख खाँण । ८ मिनेट पहिले
चर्च भवन भँकित्दा २२ जनाको मृत्यु १९ मिनेट पहिले
पोल्याण्डका राष्ट्रपति डुडालाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि २१ मिनेट पहिले
भाजपा नेता तथा महाराष्ट्रका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई संक्रमण पुष्टि २५ मिनेट पहिले
ब्रुनेईका राजकुमार अजिमको असामयिक निधन २८ मिनेट पहिले
यो वर्षको दशैँ कोरोनाले खल्लो, सखियाको मादल बज्न छोडेपछि गाउँ रौनकविहीन ३२ मिनेट पहिले
नवरात्रमा पनि खुलेनन मन्दिर, भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरि फर्किए ३ घण्टा पहिले
आज नवरात्रको आठौँ दिन, विधिपूर्वक गरियो महागौरीको पूजाराधना ४ घण्टा पहिले
दशैँको मनोवैज्ञानिक पक्ष : चाडपर्वले मानसिक स्वास्थ्य सबल बनाउछ ! ५ घण्टा पहिले
डा. बाबुराम भट्टराई दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी १२ घण्टा पहिले
कलशा चर चल सखी कलशा भर मैथिली गीत सार्वजानिक २३ घण्टा पहिले
यस वर्ष दशैँको टीकाको दिनसम्म मौसम सफा हुने ११ घण्टा पहिले
बायोटेकले आउँदो वर्षको जुनसम्ममा खोप उपलब्ध गराउने ६ घण्टा पहिले
धरानमा थप एक संक्रमितको मृत्यु ४ दिन पहिले
वाणिज्य विभागबाट ७८ लाख राजश्व सङ्कलन ५ दिन पहिले
खाँदबारीका कृषकलाई आधुनिक हलो वितरण ६ दिन पहिले
सहुलियत दरमा चिनी र नुनको बिक्री बितरण शुरु ५ दिन पहिले
विरगंज संजाल डटकमद्वारा मानव सेवा आश्रममा खाजा तथा माक्स वितरण ६ दिन पहिले
महिला हिंसाका दोषीलाई कडा कारवाहीको माग ३ हप्ता पहिले
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको बहाली १ हप्ता पहिले
कोरोना फैलिन नदिन कटुवालबाट सन्देश प्रवाह ७ दिन पहिले
रामेछापमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको शाखा १ हप्ता पहिले
कोरोनाबाट चितवनमा वडाध्यक्षको मृत्यु २ हप्ता पहिले
रुपन्देहीमा संक्रमणबाट थप एकको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या ४० जना पुग्यो २ हप्ता पहिले
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई साइकल वितरण १ हप्ता पहिले
पीसीआर परीक्षण गराउँदा परिचयपत्र अनिवार्य ३ महिना पहिले
पशुपति मन्दिरको सुन ५६ वर्षमा कति भयो होला ? १ वर्ष पहिले
हाँडीकोट : पर्यटकका लागि ‘भर्जिन डेस्टिनेसन’ ८ महिना पहिले
बहराइनका राजकुमारलाई लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहणको अनुमति २ महिना पहिले